सरिता गिरीले नयाँ नक्सा अस्विकार गरिन् ! सरितालाई नक्सा अस्विकार गर्न लगाउने को हो ? हेर्नुहोस - Enepalese.com
सरिता गिरीले नयाँ नक्सा अस्विकार गरिन् ! सरितालाई नक्सा अस्विकार गर्न लगाउने को हो ? हेर्नुहोस
इनेप्लिज २०७७ जेठ २८ गते २१:०९ मा प्रकाशित
समाजवादी पार्टीले निशान छापमा नयाँ नक्सा समेट्न सरकारले ल्याएको संशोधनमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी सरिता गिरीलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ।
समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बने पनि अहिलेसम्म दुवै दलले संसद भित्र एउटै दलको मान्यता पाएका छैनन्। समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले पार्टीका तर्फबाट गिरीलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएका हुन्।